सत्य दर्शनमा केहि टिप्पणीहरू |
सत्य दर्शनमा केहि टिप्पणीहरू
जोन एल मोर्गन द्वारा
यो दृष्टि मा डाँडाको उपदेश
यो आशा गरिएको छ कि यो राम्रो दृष्टिमा रुचि राख्ने जो कोहीलाई पनि मूल्यवान हुन सक्छ। यिनीहरू मुख्यतया क्रिश्चियन साइन्सका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गरिएको छ, जसले सबै कुरामा ईश्वरीय नियमहरू छन् जुन हामीले पालन गर्नुपर्दछ। मेरी बेकर एड्डीको आध्यात्मिक दर्शन अरु वैज्ञानिक र ईसाई थियो। उनको पुस्तक, विज्ञान र स्वास्थ्य विथ कि धर्मशास्त्रको कुञ्जीमा भएको शिक्षणले आध्यात्मिक ज्ञानलाई सटीक आध्यात्मिक रोशन मात्र नभई व्यावहारिक र उपचार पद्धतिबाट पनि बुझ्ने आँखा खोलिदिन्छ। यी नोटहरू लेखिएका हुन् जबका दृष्टिकोणहरू पीपीमा उनको कथनमा फेला पार्न सकिन्छ। 561 : 16-20: "यूहन्नाले मानिस र ईश्वरीय संयोगलाई यूहन्नाले देखेका थिए जसमा मानवतालाई जीवन र यसको प्रदर्शनमा अँगालेको छ - मानव धारणालाई कम गर्न र जीउड ईश्वर हो भनेर बुझ्न ।"
दुबै आत्मिक विकास र ईश्वरीय उपचार को प्रक्रियाहरू दर्शनको गतिविधिहरू हुन्। यस्तो शब्दहरू रोशनी, उच्च विचार, विवेक, गलत र सहीको बिच फरक पार्ने सामान्य समानताहरू वा आध्यात्मिक समझ हो। सत्य दर्शनले प्रकट गर्दछ कि "जुन ठाउँमा तिनीहरूलाई भनिएको थियो, 'तिमीहरू मेरा मानिसहरू हौ', त्यहाँ तिनीहरूलाई भनिएको छ, ' तपाईं जीवित परमेश्वरका छोराहरू हुनुहुन्छ' (होशे 1 : 10)।
यी नोटहरू, जुन अभ्यासबाट उत्पन्न भएको हो, विद्यार्थीको इसाई र वैज्ञानिक दृष्टिकोणको आफ्नै अभ्यासको लागि सुझावको रूपमा बुझेको छ। तिनीहरू पूर्ण हुनको लागि लक्षित छैनन्, तर व्यक्तिगत अन्वेषणको लागि आधारको रूपमा काम गर्न सक्दछन्।
जोन एल। मोर्गन
एल्मडन केसर वाल्डन मे, 1963 एसेक्स,
इ इंग्लंड ्ग्ल्यान्ड
यस पुस्तकमा प्रयोग गरिएको एब्रेभिएट आयनहरू:
S. & H. विज्ञान र स्वास्थ्य
Ret. रेट्रोस्पेक्शन र ईन्ट्रोस्पेक्शन
CSH क्रिश्चियन विज्ञान भजन
मन देख्ने दिमाग हो, जसले असीमलाई प्रकट गर्छ र बुद्धिको प्रकाश दिन्छ। यो संसारमा आउने हरेक मानिसलाई उज्यालो हो।
दिमागले मलाई देखाउँदछ कि दर्शन आध्यात्मिक ज्योति हो, भौतिक अंगहरू होइन। यस प्रकाशको साथ, मलाई थाहा छ कि दर्शन भनेको विचारको प्रकाश हो, यसले सबै चीजहरूको अर्थ र महत्त्वलाई प्रकट गर्दछ। यो भौतिक फारमबाट जानकारी प्राप्त गर्दैछ, न त कुरा हेर्ने प्रयास हो। दिमागले "गहिरा र गोप्य कुरा" प्रकट गर्दछ जुन "आँखाले देखेको छैन।" उसको मनको टीमा , म जान्दछु म देख्न सक्दछु, किनकि म प्रभावबाट नभई कारणबाट हेर्छु।
मेरो दृष्टिबाट केहि पनि लुकाइएको छैन किनकि माइन्डले प्रत्येक पल्ट हेर्नु पर्ने विचार प्रस्तुत गर्दछ। माइन्डको दर्शन सँधै सक्रिय र अथक छ र यसले "मिन्ट डी-फ्याकल्टीज " को अनन्त अभ्यासको लागि माग गर्दछ। केवल कुरा। मेरो दृश्य पूर्ण रूपमा सतर्क र चौकस छ, किनकि यो दिमागको उपस्थिति हो।
दिमागले मेरो दृष्टिकोण सिर्जना गर्दछ, यसको स्वामित्व राख्दछ, यसलाई नियन्त्रण र शासित बनाउँदछ , र यसलाई कहिले देख्ने मेसिनरीमा हस्तान्तरण गर्दैन। के मैले मेरा आँखालाई गलत हिसाबले हेर्ने हो त्यो मात्र सीमित दृश्यको मात्र हो; तिनीहरू वास्तवमै ईश्वरीय दृष्टिकोणका सेवकहरू हुन्, र तिनीहरू सबैले देख्ने दिमागमा आज्ञाकारी छन्।
विज्ञान र स्वास्थ्य 121 : 17-24
विज्ञान र स्वास्थ्य 284 : 28-32
विज्ञान र स्वास्थ्य 263 : 32-12
विज्ञान र स्वास्थ्य 485 : 4-5
* विज्ञान र स्वास्थ्य 487 : 6-12, महाराष्ट्र विज्ञान र स्वास्थ्य 488 : 23-24
विज्ञान र स्वास्थ्य 572 : 19-12
विज्ञान र स्वास्थ्य 151 : 20-28
आत्मा एक मात्र साँचो अवधारणा हो, मानव अवधारणा भन्दा एकदम फरक र सधैं यसलाई सही। दृश्यलाई सच्याउनु आत्माको एउटा कार्य हो, र त्यसैले आध्यात्मिक स्पष्ट -दर्शिता मेरो लागि स्वाभाविक हो, सबै चीजहरूलाई वास्तवमै फरक पार्दै।
आत्माद्वारा मैले सबै चीजहरू ठीकसँग, स्पष्ट, सही, स्पष्ट, आध्यात्मिक रूपमा देख्छु। यसले मलाई डि दिन्छ , ताकि म एउटा विचार र अर्को बीचमा भिन्न छु, र यो पनि सही र गलत बीचमा। आत्माको यो स्थिरताले मलाई अनुभूति, ज्ञानेन्द्रिय, दृढता दिन्छ। यसले मेरो बुझ्ने आँखा खोल्छ। यसले मलाई के वास्तविक हो र के अवास्तविक छ देखाउँदछ।
टी उसले आत्माको स्पष्ट दृश्य मलाई गल्ती र त्रुटिहरूमा अन्धो तुल्याउँदैन। बरु म तिनीहरूलाई अधिक स्पष्ट रूपमा पत्ता लगाउँछु - तर असत्यताको रूपमा। म केवल राम्रो र वास्तविक हुनको लागि छुट्याउँछु, र त्यसैले मेरो आँखा एकल छ। म सकारात्मक, राम्रो र सत्यको लागि खोज्छु। स्पा रीटमा , राम्रो दृष्टि स्वाभाविक हो, र यो अपरिवर्तनीय छ।
किनभने आत्मा सदाका लागि प्रकट गरिएको वास्तविकता हो, मेरो दृश्य दिनदिनै स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। मलाई पुरानो अवधारणा र झूटा विचारहरू गायब भएको देख्दा खुशी लाग्यो। आत्माले मलाई नयाँ दृश्यहरू, साँचो, नयाँ विचार, र यस्तै प्रकारको ब्रिग जन्म दिन्छ मेरो दर्शनमा नयाँ मानिस।
यो आत्मा हो जसले देख्दछ, शरीर होइन, र आत्माको इन्द्रियहरु अविनाशी र सिद्ध हुन्छन्। मेरो दृष्टिकोण सधैं सकरात्मक, कहिले पनि नकारात्मक हुँदैन, किनकि मेरो दृष्टिकोण आध्यात्मिक छ।
विज्ञान र स्वास्थ्य 264: 13-15
विज्ञान र स्वास्थ्य 476: 32-4
विज्ञान र स्वास्थ्य 502: 9-14
विज्ञान र स्वास्थ्य 281: 28-30
विज्ञान र स्वास्थ्य 323: 32-6
विज्ञान र स्वास्थ्य 505: 20-22
विज्ञान र स्वास्थ्य 582: 1-2
विज्ञान र स्वास्थ्य 586: 3-6
मत्ती 6: 22
आत्मा आध्यात्मिक भावनाको संकाय हो, जसले मलाई भित्री दृष्टि, वा आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि दिन्छ। यो सहज ज्ञान इन्द्रिय भित्री आका्क्षा र अवलोकन हो, र यो पूर्ण रूपमा असहयोगी हो । यसले मेरो चरित्रको बोधलाई ठूलो पार्दछ, वास्तविकता र मैले देखेको चीजको प्रकृति प्रकट गर्दछ।
आत्माको प्रवेशद्वारा मैले पापरको मानिस भित्र पापको भेस लगाएर देख्छु। म वास्तविकता संग उपस्थिति भ्रमित छैन। म प्रतीकहरु भन्दा पर विचारहरु को वास्तविकता को लागी हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो दृष्टि बढ्दै जाँदा, प्रतीकहरू कायापलट हुन्छन्।
आत्माको इन्द्रिय शारीरिक शरीरका माध्यमबाट कार्य गर्दैन, तर आत्मिक भावनाको अभ्यासबाट - किनकि म्यूसी सी लाई शारीरिक इन्द्रिय अंगको माध्यमबाट होइन, तर संगीतमय बोधबाट प्रशंसा गरिन्छ। यो बुझ्नु सामान्य हो र दर्शन को तथाकथित अंगहरु लाई चाँडो गर्नेछ, आत्मा को लागि हाम्रो व्यवहार मा विनिमय बिन्दु हो।
आत्मा सुपरसिडेस इन्धन। त्यसकारण म संवेदनशील रूपमा न्योनलाई हेर्दिन, र साँचो पहिचानको लागि बाहिरी फारममा पनि गल्ती गर्दिन। इन्द्रिय र स्वयंको घुम्टोले आत्मामा मेरो दृष्टि बिगार्दैन, तर म निश्चित रूपमा "आँखाले देखेको छैन।" सोलमा, मेरो दर्शन कहिल्यै स्वार्थ केन्द्रित "म" सँग सम्बन्धित छैन, तर सूर्यको चमकसँगै निःस्वार्थ देखिन्छ।
आध्यात्मिक समझको दर्शनको माध्यमबाट म सँधै भावनाको वस्तुहरूलाई आत्माको विचारहरूमा अनुवाद गर्छु। म सटीक र तत्काल ध्यान दिएर देख्न सक्दछु मैले जे देख्नु पर्छ, किनकि म परिपूर्ण दर्शनको साथ पहिचान हुँ।
सोलको सुख्खा भूमिले मलाई स्थिरता, आत्म-आश्वासन र आत्म-विश्वास दिन्छ। यसैले म जान्दछु म को हुँ, र म अव्यवस्थित छु, ताकि म निःस्वार्थ-चेतना, स्थिर र शान्तसँग बाहिर हेर्छु। मेरो सुक्खा भूमिबाट, मेरो दृष्टिकोण अनावश्यक, स्थायी, द्वन्द्वबाट मुक्त , र नश्वर विश्वास द्वारा खुल्ला छ। मेरो आँखा चिन्ता वा तनावले अछूत छ, तर परमेश्वरमा रहन्छ।
आत्माले भित्रीलाई बाहिरी र बाँया दायाँ सन्तुलित गर्दछ। भित्रको राज्यको साथ सुरू गरेर, म "यो पृथ्वीलाई हाम्रो पिताको राज्य बनाउन" पनि काम गर्न सक्दछु । म भौतिक इन्द्रियहरु संग के देख्छु आध्यात्मिक भावना संग मेल खान्नु पर्छ। आध्यात्मिक चिन्ता मेरो दर्शन हो; यसको अभ्यास मेरो दृष्टि हो।
विज्ञान र स्वास्थ्य 91: 16-21
विज्ञान र स्वास्थ्य 214: 5-8, 26-1
विज्ञान र स्वास्थ्य 263: 28-31
विज्ञान र स्वास्थ्य 315: 11-20
विज्ञान र स्वास्थ्य 258: 21-24, 31-1
विज्ञान र स्वास्थ्य 585: 9-11
प्रिन्सिपलले भव्य, अव्यवसायिक दृश्य प्रदान गर्दछ, जसमा मैले केही हदसम्म देख्छु, भगवानले देख्नु भए जस्तै। म सबैलाई शिर्षकको रूपमा सिद्ध सिद्धान्तको पूर्ण विचारको रूपमा देख्छु। म मानिसलाई सिद्धान्तको रूपमा देख्छु - "त्यो," एन ओटी "उसले।" ( विज्ञान र स्वास्थ्य 475: 5, 19-22 हेर्नुहोस्।) म देख्छु प्रत्येक गुण मानिसमा परमेश्वरको गुण हुन्छ, र उसको अपरेटिव ईश्वरीय सिद्धान्त बिना मानिस अवस्थित छैन। म देख्छु कि न त खराब मानिस न राम्रो मानिस नै ईश्वरीय छवि र समानता हो, किनकि मानिस आफ्नो ईश्वरीय सिद्धान्तमा फेला पर्दछ।
कुनै पनि व्यक्तिगत भावनाले मबाट ईश्वरत्वलाई लुकाउँदैन; कुनै पनि अन्धा मानवीय उल्लासले सिद्धान्तले मलाई के चाहान्छ भनेर देखाउन रोक्दैन। मेरो व्यक्तिगत निर्णय र पूर्वाग्रहहरूले मेरो दृष्टिकोण समेट्दैन र त्यसैले सिद्धान्तले मलाई दिने अलग्गै अप्पर्य ईसाललाई निष्कासन गर्दछ।
सिद्धान्तको दृष्टिकोणले मलाई देखाउँदछ कि सबै कुरा पूर्ण न्याय र समानता र धार्मिकतामा संचालित छ। "के सहि छ" र "को सही छ" मेरो आँखामा मापदण्ड छैन। त्यसकारण म गलतको लागि हेर्दिन, र जे ई-लाई गलत जस्तो लाग्छ मैले एक अव्यवसायिक झूटको रूपमा पत्ता लगाउँछु।
किनभने मलाई थाहा छ कि प्रिन्सिपल मात्र "म" हो, मेरो आँखा स्वयं-लाभ, वा प्रतिस्पर्धा, वा हीनता द्वारा मिल्दैन। मैले बाहिर हेर्न "दर्शनले को माउन्ट।" * म सही विचार र कार्यहरू हेर्न प्रेम आफ्नै को लागि ।
मेरो दर्शनको कार्य दिव्यदृष्टिको ईश्वरीय सिद्धान्तले सामंजस्यपूर्ण ढ ्गले संचालित हो किनभने सबै विचारहरूको क्षमता र दक्षता उनीहरूको शासकीय सिद्धान्तमा रहन्छ।
भजन 36: 9
जोन 5: 19
रेट्रोस्पेक्शन र ईन्ट्रोस्पेक्शन 76: 23-26
विज्ञान र स्वास्थ्य 330: 13-15
विज्ञान र स्वास्थ्य 300: 28-32
विज्ञान र स्वास्थ्य 560: 22-30
* विज्ञान र स्वास्थ्य 561: 8-9
विज्ञान र स्वास्थ्य 304: 16-19
जीवन असीमित सक्षमताको कानून हो। त्यसैले म मेरो दृष्टिलाई अधिक व्यायाम गर्दछु - आध्यात्मिक, मानसिक, र शारीरिक रूपमा - यो स्पष्ट र बलियो हुन्छ। "जोसँग छ हरेकलाई दिइन्छ, र ऊ प्रशस्त हुनेछ:" (मत्ती 25: 29) ईश्वरीय दृष्टिमा सीमितताको कुनै कानून छैन । मानिस "ईश्वरीय उर्जाको बेरोजगार चाल" हो, त्यसैले सबै चीजहरू सजिलैसँग हेर्नको लागि मैले कुनै प्रयास गरेको छैन। मेरो आँखा सदा ताजा छ किनकि यो जीवनको नयाँपनको अभिव्यक्ति हो।
मलाई थाहा छ कि मेरो आँखा फ्याटबाट सीधै आएको छ । यो जन्मबाट शुरू भएको होइन, न उमेरसँग यो कम हुँदैछ। यो उमेरविहीन, फ्याडलेस, कहिल्यै नयाँ, आत्म-नवीकरण गरिएको, र सँधै बहाल छ। मँ खुशी छु कि मँ अब सही दृश्य छ।
जीवन महान दाता हो, त्यसैले मेरो दृष्टिकोण उदार र सराहनीय छ। मेरो आउटलुक कहिले पनि अरुमा रुचि वा रुचि हुँदैन, तर सबैमा ईश्वरीय व्यक्तित्व बृद्धि गर्दछ। जीवनमा मेरो दृष्टि खुला र बहिर्गमन हो। यो बाहिरी निर्देशित छ, ताकि म सक्रिय रूपमा खोज्न र जतासुकै परमेश्वरलाई हेर्न। जीवनको नाउनेसमा, म नयाँ सत्यहरू, परमेश्वर र मानिसका नयाँ पक्षहरू, मलाई थाहा भएको कुरा लागू गर्ने नयाँ तरिकाहरू हेर्न र यसको कदर गर्नमा छिटो हुन्छु । मेरो दर्शन कहिल्यै पछाडि देखिँदैन, तर निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ।
विज्ञान र स्वास्थ्य 380: 32-1
विज्ञान र स्वास्थ्य 516: 4-8
विज्ञान र स्वास्थ्य 262: 14-16
विज्ञान र स्वास्थ्य 507: 28-29
विज्ञान र स्वास्थ्य 561: 16-20
सत्य । म कस्तो देखिरहेको छु? म कसलाई देखिरहेको छु? म के देखिरहेको छु? सत्यमा, म केवल परमेश्वरको छवि र समानता देख्छु, किनकि मानिस सत्यको पारदर्शी हुन्छ।
मेरो दर्शन मेरो सत्यको प्रेमबाट अगाडि बढ्दछ, मेरो विचारको सचेत जागरूकताबाट, र त्यहाँ फेरि म मान्छेलाई परमेश्वरको पुत्र, वा भगवानले व्यक्त गरेको देख्दछु । "मानिस" मा सबै चीजको बारे मा सत्य सामेल छ, त्यसैले म महान र सानो दुबै लाई ईश्वरीय महत्व प्राप्त गर्नका लागि मान्यता दिन्छ। मेरो ध्यान असीमित दायरा हो।
मेरो अवलोकन, आध्यात्मिक भएको, सँधै सत्यको सन्दर्भ हुन्छ, र म सत्य र ईश्वरीय केमा ध्यान दिन्छु। यो निष्क्रिय जिज्ञासामा खपिएको छैन, तर ती सबैमा स्थिर छ जुन सही मूल्यको छ।
मँ देख्छु कि त्यहाँ एकजना मात्र मानिस छ, र त्यसैले मँ जान्दछु कि एकजना मान्छे सबैको लागि राम्रो हुन्छ। म मेरो भाइ गरेको हेर्न द्रुत छु आवश्यकता र यो मानिसको मेरो दृष्टि कि क्रममा, मानसिक र आध्यात्मिक, आपूर्ति गर्न हुन सम्पूर्ण र स्वस्थ। म मान्छे फितलो, ठाडो, भगवान जस्तो देख्छु। म सत्यलाई हेर्ने अभ्यास गर्न मन पराउँछु, किनकि साँचो दर्शनले देख्न सक्ने र देख्ने दुवैलाई आशिष्‌ दिन्छ। म न्याय गर्दछु वा कुनै आलोचना गर्दछु , तर सत्यलाई परमेश्वरको आफ्नै तरिकामा त्रुटिसँग व्यवहार गर्न अनुमति दिँदछ।
सत्यमा, मेरो पुरुषत्वमा पुरुष र पुरुष दुबै समावेश छ, पूर्ण सन्तुलनमा। मेरो पुरुषत्वको दृश्य स्पष्ट दूर दर्शनमा प्रकट हुन्छ, अमूर्त र अव्यवस्थित सत्यलाई स्पष्ट र स्थिर रूपमा हेर्दै। मेरो महिलात्व आइओन राम्रो दृश्यको रूपमा प्रकट भएको छ, किनकि म घरमा भएका व्यापक सत्यहरू ल्याउन सक्छु र उनीहरूको विवरणहरूमा देख्न सक्छु, मलाई व्यावहारिक र आरामदायी ढ ्गले आवेदन दिन। मेरो पुरुषार्थ बुद्धिले देख्दछ, मेरो नारीत्व भावना संग। यी दुई दृष्टिकोणहरू ("आँखा") ओम्बिन एक रूपमा, आशंका र समझ को लागि म मा विवाहित छन्।
(सुसमाचारका पुस्तकमा, अन्धालाई निको पार्ने प्रत्येक घटनाहरू सँगसँगै “दाऊदको छोरो।” दाऊदले पुरुषत्व र स्त्रीत्वको विवाहलाई बाहिरी दृश्य र स्नायु अवधारणामा टाइप गरे । यो विवाहको आध्यात्मिक गतिविधि हो। मानव र दिव्य जो दाऊदको चाबी हुन्, जसले हाम्रो दर्शन खोल्दछ।)
सत्यमा, म छोरा हो, वा व्युत्पन्न। यसैले परमेश्वरको दर्शनको मजा लिनु नै मेरो सम्पदा हो। कुनै मानवीय उत्तराधिकारले मलाई यो कहिल्यै दिएन वा मलाई यसबाट वञ्चित गर्न सकेन।
उत्पत्ति 32: 30
उत्पत्ति 33: 10
विज्ञान र स्वास्थ्य 295: 16-24
मत्ती 7: 1-5
विज्ञान र स्वास्थ्य 518: 15-19
विज्ञान र स्वास्थ्य 593: 4-5
प्रेम मलाई यसको आफ्नै प्रिय रूपमा । ईश्वरीय आमा, प्रेम, मलाई पूर्ण र सिद्धको रूपमा गर्व गर्नुहुन्छ। म यो ईश्वरीय अवधारणा झल्काउँछु र यसलाई स्वीकार्छु, र त्यसैले गर्भधारण गर्छु र सबैलाई प्रेममा हेर्नुहोस्।
"सदाबहार प्रेमको ज्योतिले ब्रह्माण्डलाई उज्यालो बनाउँछ।" * मँ देख्छु कि प्रत्येक विचार आराममा छ, - कहिले निराश वा विफल भएन, कहिल्यै तनावपूर्ण छैन, - र त्यसैले मेरो दर्शन "कार्यमा विराजमान छ" ** र शान्त र सन्तुष्ट छ। प्रेमको दृष्टिकोणले निष्पक्षता, क्षमा, स्थिरता प्रदान गर्दछ। जसरी शेक्सपियरसँग छ:
“…प्रेम प्रेम हुँदैन
जुन कुन टरले फेर्छ जब परिवर्तन हुन्छ ,
वा हटाउनका लागि हटाउनेसँग झुम्काउँछ:
ओ, होईन ! यो एक स्थिर-स्थिर चिन्ह हो,
जुन प्रलोभनमा देखिन्छ, र कहिल्यै हल्लिन हुँदैन..."
म आध्यात्मिक निर्दोषताको आँखाले हेर्छु र कुनै खराबी देख्दिन, किनकि हामी ईश्वरीय उपस्थितिमा छौं। म प्रेममा मान्छे हुँ र अपूर्णताको सबै भावना हटाउँछु , सबै डर र मन नपर्ने। म प्रेमको परोपकारको आँखाले हेर्छु र भगवानमा भएका सबै र ्ग र गुणहरू मानिसमा देख्छु। यस दृश्यमा ईश्वरीय प्रकृतिको पूर्ण मान्यता छ। त्यसैले म कृतज्ञताको आँखाले हेर्छु , किनकि दिव्य महिमाले सबै ठाउँ भर्दछ। एक कृतज्ञ दृष्टिकोण संग म मेरो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा आमा हुँ र पवित्रताको सौन्दर्य अभिव्यक्ति मा आकर्षित गर्दछु।
“मैले ईश्वरको प्रेम ब्रह्माण्ड र मानिसमा घेरेको देखेको थिएँ , सम्पूर्ण ठाउँ नै भरिएको थियो र ईश्वरीय प्रेमले मेरो आफ्नै चेतना खायो कि मैले ख्रीष्टको जस्तो अनुकम्पाले देखेको सबै कुरामा प्रेम गरें। ईश्वरीय प्रेमको यो अनुभूतिले पवित्रताको सुन्दरतालाई अभिव्यक्तिको रुपमा बोलायो, ​​जुन पूर्णता हो जुन निको भयो, पुनर्जन्म भयो र हेल पीको लागि मतिर फर्केका सबैलाई बचायो । " (श्रीमती एडीको लागि योगदान। गिल्बर्ट सी। कारपेंटर, जूनियर, सीएसबी द्वारा प्रकाशित "जनरल कलेक्टानिया" ..)
विज्ञान र स्वास्थ्य 248 : 3-4
विज्ञान र स्वास्थ्य 260 : 7-12
* विज्ञान र स्वास्थ्य 503 : 14-15
** विज्ञान र स्वास्थ्य 519 : 25
विज्ञान र स्वास्थ्य 577 : 19-27
सात समानार्थी दर्शनको बारेमा ई ई सत्यहरू प्रस्तुत गर्दछन् , तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेर्ने अभ्यासको साथ चार दृष्टिकोण हो।
चार ठाँउहरु जहाँबाट हामी हेर्दछौं:
वचन सत्यको अभिव्यक्ति हो, र यसले सत्यलाई हेर्न र जान्न मेरो इच्छालाई प्रेरित गर्दछ।
ईसाई सत्यको चेतना हो, र प्रदान गर्दछ, र यसैले मैले सत्यको दृष्टिकोण खोज्छु र अपनाउँछु।
ईसाईत्वले हरेक क्षेत्रमा सत्यता प्रदर्शन गर्दछ, र त्यसैले म स्वाभाविक रूपमा सत्यको सर्वोच्चता महसुस गर्दछु।
विज्ञानले सत्यलाई भगवानको रूपमा व्याख्या गर्दछ, र त्यसैले मानिस क्रमिक रूपमा ईश्वरीय देखिन्छ ।
यी चार दृष्टिकोण, - मेरो खोजी, मेरो खोजी, मेरो प्रमाण, मेरो अस्तित्व, - लाई "सत्यको आत्मा" (यूहन्ना 16 : 13) वा ईश्वरीय विज्ञानको शक्तिले ल्यायो । यसैले म देख्छु र जान्दछु कि आत्मा आत्मा हुनुहुन्छ जसले यो देख्नु हुन्छ, जो कि प्रकट हुँदछ, म सदैव र सदाको लागि हुँ।
उत्पत्ति 13:14 “अनि प्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो,। । । अब आफ्नो आँखा उठाउनुहोस्, र तपाईं उत्तर, दक्षिण, र पूर्वतिर र पश्चिममा भएको ठाउँमा हेर्नुहोस्: "जहाँ मेरो चेतना हुन सक्छ, म त्यहाँबाट ईश्वरीय कम्पास वा क्यालकुलसको चार दृष्टिकोणमा हेर्न सक्छु । सत्य दर्शन भनेको आध्यात्मिक गणना हो, र आत्मिक दृश्य र तर्कले दृष्टिलाई सामान्य बनाउँछ र मिलाइदिन्छ।
दर्शनमा डाँडाको उपदेश
ईश्वरीय क्यालकुलस र सत्य दर्शनको बीचमा यो सम्बन्धको बारेमा एक रोशनकारी टिप्पणी डाँडाको उपदेशमा पाइन्छ। त्यहाँ, आत्मा वा सत्यको टोन भएको प्रत्येक सेक्सनमा (एक अपवाद बाहेक) हेर्न, आँखा, वा हेर्दा सन्दर्भ छ। यसबाहेक, दर्शनका लागि सबै प्रत्यक्ष सन्दर्भहरू ती सेक्सनहरूमा र अन्य कतै छैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, आत्मिक गणना भनेको सत्य हुनु र सत्यमा विश्वास गर्नु हो भन्ने तथ्यहरूको स्पष्ट आत्मिक विवेक हो र यसको परिणाम सत्य हुन्छ।
वचनले जीवनमा मेरो मार्ग प्रकट गर्दछ, मलाई कुन बाटोमा जानुपर्दछ भनेर देखाउँदछ, र मेकले प्रत्येक पाइला स्पष्ट पार्छ। त्यसैले म प्रकाशमा अगाडि बढ्छु, विश्वास र विश्वासमा; म दिक्क लाग्न सक्दिन, अनिश्चित वा चिन्तित हुन सक्दिन, किनकि "उहाँ जान्नुहुन्छ कि उहाँ कसरी जानुहुन्छ, र म उहाँसँगै हिंड्नेछु" ( क्रिश्चियन साइंस भजन 148)।
प्रकाशको वचनले देखाउँदछ कि मानिस आत्मिक दिमागको हो र भौतिक तनावमा छैन। त्यसकारण म स्वाभाविक रूपमा ईश्वरीय अन्तर्दृष्टिको आनन्द लिन्छु, विचारबाट पढेको हो र कुनै विषयवस्तुबाट होइन। त्यसैले मेरो दृष्टिकोण शाब्दिकबाट प्रेरणादायक सम्म लगातार बढिरहेको मापनमा छ।
शब्दमा, मेरो दृष्टिकोण ट्रट एच लाई हेर्न र चिन्न इच्छा गर्दछ । “मेरा आँखा खोलिदेओ, ताकि म तपाईंको व्यवस्थाबाट अद्भुत चीजहरू देख्न सकें” (भजन 119:18)।
ख्रीष्ट ईश्वरको आदर्श हो, र ईश्वरीय स्वरूपमा मानिसलाई देख्ने मानिसमा खोजी गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टको दृष्टिकोणले हाम्रो मानव अवधारणालाई रूपान्तरण गर्दछ, ताकि हामी सत्यको पारदर्शी भएको देख्न सक्दछौं , जसरी येशू भगवानले एउटा झ्यालको रूपमा काम गर्नुभयो। जसले मलाई ठीकसँग देखेको छ, उसले बुबालाई देखेको छ। (यूहन्ना 14: 8-10 हेर्नुहोस्।) हामी ख्रीष्टको रंगीन चस्मा लगाएर हेर्छौं ।
तर यो ख्रीष्टको ज्योति अमूर्त र स्थिर छैन: यो यमनामिक र व्यवहारिक हो किनभने सत्यले हाम्रो भ्रममा पक्कै प्रभाव पार्छ। यसैले ख्रीष्टको दृष्टिकोण मात्र मेरो आँखा हो: यो मेरो चिकित्सक र च ्गाइ, रिमेक, बहाल र नयाँ बनाउने काम पनि हो।
यो ख्रीष्टको दृष्टिकोणले असीमलाई असीम सीमलमा अनुवाद गर्दछ , ताकि म जीवनको सानो सानो विवरणमा ईश्वरीय प्रकट भएको देख्दछु। सत्यको आत्माले सबै कुरा उज्यालो र परिवर्तन गरेको छ।
ईसाई वास्तविक दृष्टिकोणमा दृष्टिकोण हो, अभ्यास। ( विज्ञान र स्वास्थ्य 487 : 6-9 हेर्नुहोस् ।) मैले भित्री आँखाले के देखेको थिएँ, म अब बाह्य देख्छु। "मैले तपाईको कानमा सुनेर सुनें। तर अब मेरो आँखाले तिमीलाई देख्दछ" (अय्यूब 42: 5)।
इसाईमतमा, म साँचो दर्शनको हरेक पक्ष प्रयोग गर्न मन पराउँछु; तर म यो पनि थाहा पाउँदछु कि म त्यसको अभ्यास गर्दैछु । यी अध्यापन र गुणहरूले आफूलाई र म र सबैको रूपमा प्रदर्शन गर्दछ, किनकि मेरो दृश्य भनेको सत्यको प्रतिबिम्बित मात्र हो।
इसाईमतमा, दर्शन बाहिरी संग भित्री सम्बन्धित छ। त्यसैले म मेरो आफ्नै मामिलामा आत्म-अवशोषित, वा छुटेको छैन , तर एक योजनामा ​​सबै विचारहरूको अन्तर-सम्बन्धको बारेमा राम्ररी सचेत छ, र म सबैमा चासो र आश्चर्य र प्रशंसाको साथ हेर्छु। ( विज्ञान र स्वास्थ्य 516: 4-8 हेर्नुहोस् ।)
इसाईमतमा प्रमाण, असत्य कुराको सहि र गलत प्रमाणको समावेश छ । जहाँ म हेर्छु, म सचेत छु कि ईश्वरीय प्रेम च गाइ र पुनर्जन्म गर्न र बचत गर्नको लागि सञ्चालनमा छ। यसैले म जे देख्छु त्यसबाट म कहिल्यै डराउँदिन, किनकि म सत्यको सर्वोच्चताको बारेमा बढि सचेत छु।
विज्ञान विज्ञानको हो, र विज्ञानको मनोवृत्ति पूर्णताको यस प्लेटफर्मको साथ अनुरूप जीवन बिताइरहेको छ। मेरो दृष्टि आकाशीय ईमानदारीको अपरिवर्तनीय तथ्यहरूमा बस्दछ।
दुष्टता हेर्न भन्दा परमेश्वर शुद्ध आँखा हुनुहुन्छ, र अधर्ममा नजर लगाउँनुहुन्न। (हबकूक 1: 13 हेर्नुहोस् ।) “ आफूले बनाउनुभएको हरेक कुरा परमेश्वरले देख्नुभयो र, होल्ड गर्नुहोस्, यो एकदम राम्रो थियो” ( उत्पत्ति 1: 31)। “यस विज्ञानमा हामी मानिसलाई ईश्वरको स्वरूप र समानतामा भेट्टाउँछौं। हामी देख्छौं कि मानिसले आफ्नो आध्यात्मिक सम्पदा र आफ्नो अनन्त सद्भाव कहिल्यै हराएको छैन ”( विज्ञान र स्वास्थ्य 548: 5-8)।
विज्ञान दृष्टिकोणमा, हामी उद्घोषणा गर्छौं, "म हेर्छु!" मेरो र दृष्टिकोण प्रिंसिपल को संग मेल खान्छ। मँ के देख्छु, - वा बरु, म यो देख्छु। “येशूले विज्ञानमा सिद्ध मानिस देख्नुभयो..." (विज्ञान र स्वास्थ्य 476: 28-8हेर्नुहोस् ।)
विज्ञान व्याख्या हो, र सबै चीजहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दछ। सबै स्पष्ट र व्याख्या गरिएको छ, र हुनुको कुनै समस्या छैन। मेरो दृश्यमा, तसर्थ, कुनै तनाव छैन, कुनै तीव्रता छैन, मेरो अस्तित्व भएको भन्दा पर आध्यात्मिक निष्कर्षहरू बुझ्न बाध्य पार्नु आवश्यक छैन। यो ईश्वरीय विज्ञान हो कि मलाई एन डी बुझ्नु पर्ने सबै कुरा प्रकट गर्दछ र व्याख्या गर्दछ । मेरो दर्शन वास्तवमा परमेश्वरका गहिरा चीजहरूमा प्रवेश गर्दछ, तर यो बौद्धिक प्रयास होइन; यो प्राकृतिक आत्मिक भावना हो। ( विज्ञान र स्वास्थ्य 258: 31-1हेर्नुहोस् ।) त्यसोभए मेरो दृश्य, कहिले खोज्ने क्रममा पनि, शान्त छ।
तर जस्तो लेखिएको छ, आँखाले देखेको छैन, कानले पनि सुनेको छैन, न त कोही मानिसका हृदयमा छिराएको छ, जुन कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुभएको छ। तर आत्माले ती सबै हामीलाई, जो परमेश्वरका गहिरा-गहिरा कुराहरूमा खोजी गर्नुहुन्छ। के मानिस लागि उहाँलाई छ जो मानिसको आत्मा बचत, मानिसको कुराहरू जान्दिनँ? त्यस्तै गरी, परमेश्वरका कुराहरूले कुनै मानिस जान्दैन , तर परमेश्वरको आत्मालाई जान्छ ”(1 कोरिन्थी2: 9-11)।